'अहिले हाम्रो नेता नै केपी ओली': बर्षमान पुन - Current Nepal News
‘अहिले हाम्रो नेता नै केपी ओली’: बर्षमान पुन
| 398 Views | Published Date : 25th February 2018 |
माओवादी केन्द्रको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली वाम गठबन्धनको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेको एक साता वितिसकेको छ। तर गठबन्धनको मुुख्य घटक माओवादी सरकारमा संलग्न् भएको छैन। पार्टीभित्रै आन्तरिक विवाद र एमालेसँगको पदीय भगबन्डाको अन्तिम छिनोफानो नभएकाले सरकार विस्तारमा विलम्ब भईरहेको हो । यसै सन्दर्भमा सरकार विस्तार र पार्टी एकतासम्बन्धी दुवै काममा उत्तिकै सक्रिय भुमिका निर्वाह गरिरहेको माओवादी केन्द्रका नेता बर्षमान पुनसँग गरेको कुराकानीको केहि अंश :
पार्टी एकतामा नेता कार्याकर्ताको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ?
हामी करिव ५० बर्ष अलगअलग स्कुलिङमा हुर्किएका पार्टी हौँ । त्यैले संयम र धैर्यतासाथ अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । दुवै पार्टीमा विभिन्न प्रतिक्रिया आएका छन्। कसले के छोड्यो हिलो तर हामी सबैले अहिले नेतृत्वलाई शंकाको लाभ दिऔं । एकता हुँदा कोही घटुवा हुने वा कोही बढुवा हुने भन्ने होईन, यसबाट बेखुसी पनि हुनुपर्दैन । सबै वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता सबैलाई उचित कार्यविभाजन र सम्मानित हुने अवस्था सिर्जना गर्छौँ । यसले सबै तहका नेताहरुले ईतिहास लिएको यो परीक्षामा उत्तीर्ण हुने कोसिस गरौँ भन्ने मेरो आग्रह छ ।
पार्टी एकता कहिलेसम्म भईसक्छ ?
दुई कार्यदलले १५ दिनको समय पाएका छन्। अव तया अवधिभित्रै हामी हाम्रो प्रतिवेदन र सुझाव तयार गर्छौ । अनि नेतृत्वमा छलफल गरेपछि चैतको पहिलो साता एकतामा पुगौँला। सुरुमा केन्द्र, त्युसपछि प्रदेश, जिल्ला र पेसागत संगठनको एकीकरण गर्ने विधि हुन्छ ।
पालिहे गठबन्धन बनाउँदा सरकार बन्छ, अनि पार्टी एकता हुन्छ भन्ने कल्पना थियो तर निर्वाचन प्रक्रिया लम्बिएपछि हामी एकता प्रक्रियामा केही आरोह अवरोह देखियो। अनि त्यही बीचमा सरकार बनाईहाल्नुपर्ने भयो। त्यसैले दुवै दलबीच सबै विषयमा कुरा टुंगिसकेको थिएन। अव मन्त्रालय बाँडफाँट करिब भईसकेको छ।
प्रधानमन्त्रीले चाहेको समयमा अब सरकार विस्तार भईहालछ। माओवादी तयार अवस्थामा छ।
माओवादीले पठाउने मन्त्रीको नाम तय गरिसक्यो त ?
मोटामोटी तयार भएको छ। नेतृत्वमा तहमा पठाईने साथीहरुको नामको ‘रोस्टर’ तयार छ ।